'नाइट' र 'क्विन'को बहार
Sunday, 10 June 2012 10:01	नागरिक
सुकृत नेपाल, काठमाडौं, जेठ २८- 'लुट' र 'चपली हाइट'ले बक्स अफिसमा पैसा छाप्न थाले लगत्तै समीक्षकहरु खबरदारी गर्दै थिए, 'होसियार लुटकै दिशामा जाने हो भने अराजकता फैलिन सक्छ।' यो चेतावनी कानमा नखस्दै ठ्याम्मै यही शैलीमा फिल्म निर्माणको शृंखला सुरु भयो, जसका कारण यतिबेला नेपाली फिल्ममा गन्जागोल पैदा भएको छ।
गर्भवती दुई हिरोइनलाई दही च्युरा
Friday, 08 June 2012 08:50	नागरिक
स्मृति ढुंगाना, काठमाडौं, जेठ २६ -फिल्मका हिरोइनहरु एकअर्काप्रति ईर्ष्यालु हुन्छन् भनिन्छ। तर, बिहीबार उनीहरुले यो गलत पुष्टि गर्दै सुमधुर जमघट गरे। फिल्मबाट केही समय विश्राम लिएका हिरोइनहरू एक हिरोइन ऋचा घिमिरेको घरमा पुगे। गर्भवती दुई अभिनेत्री ऋचा र सञ्चिता लुइँटेललाई दहीच्युरा खुवाउन उनीहरुको जमघट तय भएको थियो। सञ्चिता, अरुणिमा लम्साल र मेलिना मानन्धर घरबाटै आफूले बनाएका विभिन्न परिकार बोकेर ऋचाको घरमा दिउँसो भेला भए।
युट्युबमा भेटिन थालेपछि हतारमा 'लुट'को डिभिडी
Friday, 08 June 2012 00:32	नागरिक
काठमाडौं, जेठ २६ (नागरिक)- अनलाइनमा पाइरेसी हुन थालेपछि सुपरहिट फिल्म 'लुट'को आधिकारिक डिभिडी अर्को साता रिलिज हुने भएको छ। विदेशमा विशेष प्रदर्शनीका लागि पठाउँदा पाइरेसी भएको अनुमान छ। वैशाख दोस्रो सातादेखि यु ट्युबमा फिल्म फैलिएको थियो।
'विभिन्न एकाउन्टबाट अनलाइनमा राखिएका फिल्मलाई हटायौं। हरेक रात हटायो, भोलिपल्ट दिउँसो फेरि राखिन्थ्यो। प्रहरीमा उजुरी गर्दा पनि खासै केही हुन सकेको थिएन,' निर्देशक निश्चल बस्नेतले भने।
तस्लिमाको आलोचनाको घेरामा पूनम र सन्नी
Thursday, 07 June 2012 16:49	राजेन्द्र ज्ञवाली
मुम्बई, जेठ २५ (एजेन्सी)-बंगलादेशी विवादास्पद लेखिका तस्लिमा नसरिनले हट मोडल पूनम पाण्डे र बलिउडमा भित्रिएकी पोर्न स्टार सन्नी लिओनको कडा आलोचना गरेकी छिन्। पूनम पाण्डे र सन्नी लिओनलाई भारतमा आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिदै गरेको उनले बताएकी छिन्।
एउटा पोर्न स्टारलाई जसरी सेलिबृटी बनाएर महिमामण्डित गरिदै छ, त्यसले युवतिहरूमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको तस्लिमाले बताएकी छिन्।
'यही क्रम जारी रहने हो भने तपाइहरूको छोरी इन्जिनियर, डाक्टर, अध्यापक नभएर पोर्न स्टार बन्ने सपना बुन्न थाल्ने छन्।' तस्लिमाले बताएकी छिन्।'
तस्लिमाले टि्वटरमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेकी छिन्,'एउटा पोर्न स्टार सन्नी लियोनलाई भारतमा यतिका महत्व किन दिइदै छ?
म्युजिक भिडियोमा लेनदेन
Thursday, 07 June 2012 10:51	नागरिक
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, जेठ २५ -एउटा सांगीतिक कार्यक्रममा गीतकार किरण खरेलले महिनावारी पैसा बुझेर गीत 'हिट' गराउने मिडियामाथि औंला उठाए। उनका कुरामा धेरैले सही मात्र थापेनन्, 'सबैले भोगेको तर मुख खोल्न नसकेको' तथ्य औंल्याएको भन्दै ताली पिटे। टेलिभिजन र रेडियोमा गीत बज्न स्तर होइन 'गिभ एन्ड टेक' चल्न थालेकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरे।
सेक्स कन्टेन्टका फिल्मलाई के गर्ने?
Wednesday, 06 June 2012 09:02	नागरिक
काठमाडौं, जेठ २४ (नागरिक) - निर्देशक यादव खरेलले फिल्म बनाउँदा समय, समाज र सामाजिक मूल्य मान्यता बुझ्न सुझाव दिएका छन्। अहिलेका फिल्ममा 'अश्लीलता'को बाढी आएको ठहर गर्दै नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले मंगलबार आयोजना गरेको 'वर्तमान नेपाली चलचित्रको अवस्था, भविष्य र चलचित्रकर्मीको दायित्व' विषयक अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो भनाइ राखेका हुन्।
रिसाउँदा हात हाल्ने हिरोइन
Tuesday, 05 June 2012 14:55	नागरिक
स्मृति ढुंगाना, काठमाडौं, जेठ २३- अभिनेत्री रेखा थापालाई लाग्छ, ‘रिसाएको बेला म काली चण्डी देखिन्छु।' हाल ‘जाउँ हिँड पोखरा'को सुटिङमा व्यस्त उनी यही फिल्मको दौरानमा धेरैपटक रिसाइसकेकी छिन्। परिस्थिति अनुसार उठ्ने क्षणिक रिसको बेला कसैले फकाइदियोस् भन्ने चाहना उनमा पैदा हुन्छ।
'अपवाद' असार १ मा
Monday, 04 June 2012 14:57	नागरिक
काठमाडौं, जेठ २२ (नागरिक)- जेठ ५ मा रिलिज हुन नसकेको फिल्म 'अपवाद' असार १ मा रिलिज हुने भएको छ। राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् निर्माण पक्षले रिलिज मिति तोकेको हो। कार्यक्रममा फिल्मको प्रोमो र विदेशमा फिल्म देखाउँदा प्राप्त प्रतिक्रिया देखाइएको थियो। 'देशको राजनीतिक अवस्थाले घोषित समयमा फिल्म देखाउन सकिएन,' निर्माता सुसन प्रजापतिले भने, 'प्लस टु माथिका दर्शकलाई लक्षित गरेका छौं।
'राउडी राठोर' : आँखाको तिरिमिरी
Monday, 04 June 2012 08:36	नागरिक
दीपेन्द्र लामा - बलिउड एउटा यस्तो 'भान्छाघर' हो, जहाँ सम्भवत संसारकै सबभन्दा मसालादार 'परिकार'हरु पाक्छ। मसलाले खानालाई स्वादिलो बनाउँछ। तर, यसको 'ओभर डोज' स्वास्थ्यको लागि बिल्कुल हानिकारक छ। हिन्दी फिल्म 'राउडी राठोर' त्यही भान्छाघरमा पाकेको एउटा मसलादार परिकार हो। भारतीय फिल्महरुमा चट्याकचुटुक नाच्ने प्रभु देवा यसका 'भान्छे' हुन्। उनले बम्बई फिल्मी नगरमा उत्पादन भएका सबै मसला घोलेका छन्। मसाला मात्र होइन रंगीचंगी अखाद्य रङहरु समेत पोतिएको छ।